प्रश्नोत्तर | 中央工学校附属日本語学校（東京北区）
गृहपृष्ठ > प्रश्नोत्तर
जापानीज ल्याङग्वेज स्कुल एफिलिएटेड विथ च्यूओ कलेज अफ टेक्नोलोजी क्यु एण्ड ए
कहिले भर्ना हुन सकिन्छ ?
भर्ना हुनको लागि के के आवश्यक छ ?
भर्ना हुनको लागि उमेरको हदबन्दि छ कि छैन ?
कसरी भर्नाको लागि आवेदन दिन सकिन्छ ?
छनौट शुल्क भन्नाले के बुझिन्छ ?
सर्टिफिकेट अफ ईलिजिबीलिटीको नतिजा प्रकाशन हुन कति समय लाग्छ ?
छात्राबासको ब्यबस्था छ कि छैन ? कलेजबाट छात्रावास जान कति समय लाग्छ ?
रुम मेट कसरि निर्धारण गर्ने हो ?
रुम मेट संगको सम्बन्ध नराम्रो भएको खण्डमा कोठा परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
प्रश्न नं.१० छात्रावासमा रहँदा जापानी बिद्यार्थी संग अन्तक्रिया गर्ने अवसर हुन्छ कि हुदैन ?
आफैले कोठा खोजेर घर भाडा सम्झौता गर्दा कलेज ग्यारेन्टर बस्छ कि बस्दैन ?
ट्रेनको कम्युटर पास (अनलिमिटेड यात्रा गर्ने पास) बनाउन सम्भव छ कि छैन ?
अल्पकालिन र दिर्घकालीन कोर्षका लागि भिषा नबिकरण गर्ने बिधी जान्न चाहन्छु । के म आफैले भिषा नबिकरण गर्न सक्छु ?
अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन कोर्षका लागि कुन बेलामा जापान आउन सकिन्छ ?
केहि बर्ष अघि अर्कै जापानी भाषा स्कुलमा भर्ना भई एक बर्ष जापानी भाषा अध्ययन गरेको थिए । अव एक बर्ष अध्ययन जापानीज ल्याङग्वेज स्कुल एफिलिएटेड विथ च्यूओ कलेज अफ टेक्नोलोजी मा अध्ययन गर्न चाहन्छु । के यो सम्भव हुन्छ ?
कलेज तथा जापानको जीवन शैलीको सम्बन्धमा
भर्ना भए पश्चात कक्षाको बर्गिकरण र निर्धारण कसरी हुन्छ ?
एक दिनमा कति घण्टा जति कक्षा संचालन हुन्छ ?
के कक्षामा जापानी भाषा मात्र प्रयोग गरिन्छ ? पढाइने माध्याम जापानी भाषा मात्रै हो ?
एउटा कक्षामा कति जना जति बिद्यार्थीहरु रहन्छन ?
के प्रत्येक कक्षामा कक्षा शिक्षक हुने गर्दछ ?
कक्षा परिवर्तन कति महिनाकौ अन्तरालमा हुने गर्दछ ?
पाठयसामाग्रीको रुपमा कुन कुन सामाग्रीको प्रयोग गरिन्छ ?
कलेजमा परिक्षा संचालन हुन्छ कि हुदैन ? (सानो परिक्षा, मध्यम परिक्षा, खान्जी परिक्षा)
जापानीज ल्याङग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेष्ट तथा इजेयु टेष्टको लागि आफैले आवेदन गर्ने हो कि कलेजले गरिदिन्छ ?
यस कलेजमा कुन चाँहि क्षेत्र, राष्ट्रका बिद्यार्थीहरु बढि छन ?
छात्रबृत्तिको ब्यवस्था छ कि छैन ? छात्रबृत्तिको लागि कहिले आवेदन दिन सकिन्छ ?
उच्च अध्ययनको लागि के कस्ता तयारी गरेमा राम्रो हुन्छ ?
पार्ट टाईम जब (आंशिक समयको काम) गर्न सकिन्छ ?
प्रयोगशालाको ब्यवस्था छ कि छैन ?
दिउसो को खाना के गर्दा राम्रो हुन्छ ?
एक महिनाको लिभिङ्ग कस्ट (आफनो मासिक खर्च) कति जति लाग्छ ?
कलेजको कुनै कोर्षमा भर्ना भई ६ महिनाको अध्ययन पश्चात बिचमा नै छोडेर आफनो देश फर्कनु पर्ने अवस्था आएमा कलेजबाट प्रमाणपत्र पाईन्छ कि पाइदैन ?
कलेज बाट कुनै कागजात या प्रमाणपत्र लिन परेमा कति समय लाग्छ ?
आफनो देश फर्के पश्चात अध्ययन पुरा भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि के गर्न पर्छ ? (प्रकाशन शुल्क आदि)
यस कलेजमा ३ महिना भन्दा कम समयका लागि पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ ?
कलेजमा जापानीहरु संग अन्तरक्रियाको अवसर धेरै हुन्छ ?
कलेजले जापानी भाषाका अतिरिक्त अरु भाषा (बिदेशी भाषा) हरुमा पनि सुचना उपलब्ध गराउछ कि गराउदैन ?
अहिले अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुको राष्ट्रियताको प्रतिशत कस्तो रहेको छ ?
कलेजले पार्ट टाईम जब (आंशिक समयको काम) लगाई दिन्छ कि दिदैन ?
यस कलेजले दिर्घकालीन कोर्षका लागि बर्षको ४ पटक (अप्रिल, जुलाई, अक्टोवर र जनवरी सेसनमा) भर्ना लिइन्छ । भर्नाको लागि आवेदन दिने समय अप्रिल सेसनको लागि अघिल्लो बर्षको नोभेम्वर सम्ममा, जुलाई सेसनको लागि मार्चसम्ममा, अक्टोवर सेसनको लागि मे सम्ममा र जनवरी सेसनको लागि सेप्टेम्बर सम्ममा आवेदन दिनु पर्दछ । त्यसैले समयमा नै उचित परामर्श तथा कागजपत्रहरुको तयारीको आवश्यक पर्दछ । भर्ना हुन चाहेको छ महिना अघि सम्ममा तपाईको आवश्यक कागज पत्रहरु कलेजमा आई पुग्नु पर्दछ । जनवरी सेसनको लागि भने बिद्यार्थीको लेभल हेरेर भर्ना नलिइन पनि सकिन्छ ।
अल्पकालीन कोर्ष साधारणतया बर्षको ४ पटक (अप्रिल, जुलाई, अक्टोवर र जनवरी) गरी ३ ३ महिनाको लागि संचालन गरिन्छ । भर्ना हुने बेलामा बिद्यार्थीको क्षमता हेरी कक्षा तय गरिन्छ । त्यसैले भर्ना हुनु भन्दा पहिला नै सम्पर्क गरी सल्लाह गर्नुहोस ।
३ महिना भन्दा कम अवधिको अध्ययनका लागि कलेजमा सम्पर्क गर्नुहोस ।
आवश्यक कागज पत्र तथा प्रमाणपत्रहरु का लागि भर्ना फारम हेर्नुहोस । तर, बिद्यार्थीहरुको राष्ट्र तथा बिद्यार्थीको अवस्था हेरी केहि फरक पर्न सक्नेछ । यसका वारेमा केहि अस्पष्ट भएमा कलेजमा सल्लाह गर्नुहोस ।
अल्पकालीन कोर्षका लागि १ भर्ना फारम २ पासपोर्टको प्रतिलिपि ३ पासपोर्ट साइज फोटो ४८ ३ सीएम आवश्यक पर्दछ ।
दिर्घकालीन कोर्षका लागि नियमानुसार ३० बर्ष भन्दा कम उमेरका बिद्यार्थी हुनु पर्दछ । कुनै संकाय उत्तीर्ण गरी ५ बर्ष भन्दा ननाघेको बिद्यार्थी हुनु पर्दछ । बिद्यार्थीको अवस्था बस्तुस्थिती हेरी यो शर्त लागु नहुन पनि सक्छ । कुनै निश्चित समयमा अध्ययन पुरा हुने बिद्यार्थीहरुले पनि सम्पर्क गर्नु होस ।
दिर्घकालीन कोर्षको लागि आवेदन दिन सम्भव छ कि छैन भनी निर्धारण गरि सके पछि आवश्यक कागजपत्र तयार गरी यस कलेजले निर्धारण गरेको समयसीमा सम्ममा कागज पत्र पेश गर्नुहोस । कागजपत्रको उचित परिक्षण पश्चात कलेजले जापानको अध्यागमनमा पेश गर्नेछ । आवेदन दिने सेसन, क्षेत्र अनुसार फरक पर्न सक्छ । आवेदन दिने समयका बारेमा बिस्तृतमा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि होमपेज वा गाईडलाईन्स फर एप्लिकेशन हेर्नुहोस ।
छनौट शुल्क भन्नाले भर्नाको आवेदन दिने समयमा तिर्नु पर्ने शुल्क हो । यो शुल्क बिद्यार्थीद्वारा पठाइएको कागजपत्रको परिक्षण तथा सर्टिफिकेट अफ ईलिजिबिलिटिको लागि आवेदन गर्नको लागि लिइन्छ । छनौट शुल्क २०,००० येन निर्धारण गरिएको छ । यो शुल्क फिर्ता हुदैन ।
सर्टिफिकेट अफ ईलिजिबीलिटीको नतिजा प्रकाशन हुन कति समय लाग्छ ?？
जापानको अध्यागमन बिभागमा आवश्यक कागजपत्रहरु पेश गरि सके पछि सर्टिफिकेट अफ ईलिजिबिलिटिको प्रकाशन हुनको लागि करिब ३ महिना पछि वा भर्ना हुने सेसनको करिव १ महिना अघि प्रकाशन गरिन्छ । जापानको अध्यागमन बिभागबाट सर्टिफिकेट अफ ईलिजिबिलिटि प्रकाशित भई सके पछि आफनो देशमा रहेको जापानी दुतावासमा भिषाको लागि आवेदन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस कलेजले आफैले छात्रावासको संचालग गरिआएको छ । पुरुष छात्रावास महिला छात्रावासमा एक जना बस्न मिल्ने, दुई जना बस्न मिल्ने किसिमको ब्यवस्था छ भने पुरुष, महिला दुवै बस्न मिल्ने वनरुम टाईप कोठाहरु पनि उपलब्ध रहेका छन ।
पुरुष छात्रावास बाट कलेज सम्म १९ मिनेट, महिला छात्रावासबाट २२ मिनेट र वनरुम टाईप छात्रावास बाट ५३ मिनेट जति समय लाग्छ । छात्रावासको कोठाहरुको संख्या निश्चित हुने हुनाले ईच्छुक बिद्यार्थीहरुले पुर्ब सुचना दिनु पर्ने हुन्छ । さい。
२ जना बस्न मिल्ने कोठाको लागि ईच्छुक बिद्यार्थीहरुको आवेदन अनुशार निर्धारण गरिन्छ । साधारणतया आफुले चाहे अनुसार रुममेट उपलब्ध गराउन सकिदैन ।
साधारणतया छात्रावासमा रहेका बिद्यार्थीहरुको कुनै कारणले कोठा परिवर्तन गर्न सकिदैन ।
छात्रावासको प्रयोग जापानी बिद्यार्थीहरुले पनि गर्ने गर्दछन । महिला पुरुष दुबै बस्न मिल्ने छात्रावास बाहेक अन्यमा जापानी बिद्यार्थीहरु संग पनि अन्तरक्रिया गर्नको लागि छात्रावास प्रवेश समारोह, बार्वेक्यु पार्टिहरु पनि संचालन गरिन्छन ।
छात्रावास बाहेक अरु कुनै स्थानमा आफैले सम्झौता गर्नु पर्दा कलेज ग्यारेटर बस्दैन ।
दिर्घकालीन बिद्यार्थीहरुले ट्रेनको कम्युटर पास (अनलिमिटेड यात्रा गर्ने पास) बनाउन सक्नुहुन्छ ।
जसलाई जापानीमा चुगाकु तेइकिकेन भनिन्छ । यस्ता पास १ महिना, ३ महिना र ६ महिनाको लागि बनाउन सकिन्छ ।
सर्ट टर्म भिषामा बढिमा ९० दिन जापानमा बस्न सकिन्छ तर दिर्घकालीन बिद्यार्थीहरुका लागि भर्ना हुने समय अनुसार जापान आउने समय फरक पर्ने भएकोले आउने सेसनका बारेमा सोच्नुहोस ।
प्रकेहि बर्ष अघि अर्कै जापानी भाषा स्कुलमा भर्ना भई एक बर्ष जापानी भाषा अध्ययन गरेको थिए । अव एक बर्ष अध्ययन जापानीज ल्याङग्वेज स्कुल एफिलिएटेड विथ च्यूओ कलेज अफ टेक्नोलोजी मा अध्ययन गर्न चाहन्छु । के यो सम्भव हुन्छ ?
जापानमा रहेका जापानी भाषाका बिद्यालयहरुमा बढिमा २ बर्ष अध्ययन गर्न सकिने भएकोले अर्काे एक बर्ष अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
भर्ना भई सके पश्चात बिद्यार्थीको लेभल टेष्ट गरंी बिगिनर लेभल, ईन्टरमेडियट लेभल, अपर ईन्टरमेडियत लेभल र एडभान्स्ड लेभलमा बाडिन्छ । लिखित र मौखिक परिक्षा गरी लेभल टेष्ट लिइन्छ । पहिलो पटक जापानी भाषा पढने बिद्यार्थीहरुका लागि भाषा पढनुको उद्देश्य र समयलाई मध्यनजर गरी कक्षा दिइन्छ । खान्जी प्रयोग नगर्ने देशहरुबाट आएका बिद्यार्थीहरुका लागि पनि छुट्टै बिषेश कक्षाको ब्यबस्था पनि गरिएको हुन्छ ।
कक्षाको अवधि एक दिनमा ४ घण्टा गरी अप्रिल सेसनमा १६०० घण्टा, जुलाई सेसनमा १४०० घण्टा, अक्टोबर सेसनमा १२०० घण्टा र जनवरी सेसनमा १००० घण्टा अध्यापन गराईन्छ । बिहानको सिफट ९ बजे देखि १२:३० बजेसम्म र दिउँसोको सिफट १३:३० बजे देखि १७:०० बजेसम्म हुन्छ ।
साधारणतया जापानी भाषाको माध्यमबाट मात्र कक्षा संचालन गरिन्छ । नियमानुसार अन्य भाषाहरुको प्रयोग गरिदैन तर खान्जी प्रयोग नगरिने मुलुकहरुवाट आएका बिद्यार्थीहरुको लागि अंग्रजी भाषाबाट बुझाउन पर्ने हुन सक्छ । धेरै देशका बिद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेका कारणले छुट्टीको समयमा पनि एक अर्का संग पनि जापानी भाषामा नै कुराकानी गर्ने गर्नुहोस ।
एउटा कक्षामा बढिमा २० जना बिद्यार्थी रहन्छन ।
प्रत्येक कक्षामा कक्षा शिक्षक वा शिक्षिका रहनुहुन्छ । प्रायश २ जना शिक्षक शिक्षिकाहरुले संचालन गरी प्रत्येक बिद्यार्थीहरुको रेखदेख र सहयोग गर्ने गर्दछन । त्यसैले कुनै समस्या आई परेमा बिना संकोच आफनो कक्षा शिक्षक शिक्षिका संग सल्लाह गर्नुहोस ।
कक्षाको परिवर्तन ६ ६ महिनाको अन्तरालमा हुने गर्दछ । त्यसबाहेक शिक्षक शिक्षिकाले आवश्यकता अनुशार कक्षा परिवर्तन गर्न पनि सक्छन । तर कुनै एक बिद्यार्थीले चाहे अनुशार कक्षा परिवर्तन गर्न सम्भव हुदैन ।
बिगिनर्स लेभलका लागि निहोनगो स्योक्यू दाइची, ईन्टरमेडियटका लागि बुन्खा च्यूक्यू निहोनगो १ २ भनिने पाठयपुस्तक प्रयोग गरिन्छन । साथै जापानीज ल्याङग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेष्टको एन ३ देखि एन १ सम्मका लागि प्रयोग गरिने पाठयसामाग्री उपयोग गरिन्छ । त्यसका अतिरिक्त कक्षाको क्षमता, बिद्यार्थीको चाहाना बमोजिम बिभिन्न प्रकारका सुनाई, निबन्ध लेखन आदिका लागि अतिरिक्त पाठयसामाग्रीहरुको पनि प्रयोग गरिन्छ ।
बिगिनर्स लेभलका कक्षाका लागि प्रत्येक ६ लेशनको अन्त्यमा र ईन्टरमेडियट, अपर ईन्टरमेडियट र एडभान्स्ड लेभलका कक्षाहरुमा प्रत्येक लेशनको अन्त्यमा ठुलो परिक्षाहरु लिईन्छ । त्यस बाहेक दैनिक रुपमा खान्जी परिक्षा, शब्दावली परिक्षा जस्ता साना परिक्षाहरु संचालन गरिन्छन । त्यस्तै ६ महिनाको अन्त्यमा कक्षा परिवर्तनका लागि पनि परिक्षा संचालन गरिन्छ ।
जापानीज ल्याङग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेष्टका लागि अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुका तर्फबाट कलेजले एकै पटक आवेदन दिन्छ तर ईजेयुका लागि प्रत्येक बिद्यार्थीहरुले स्वयं आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन दिने तरिका, फारम भर्ने तरिकाको बारेमा कलेजले सहयोग गर्नेछ ।
एसियाली देशहरुवाट आउनु भएका बिद्यार्थीहरु धेरै हुनुहुन्छ । चीन, नेपाल, ताईवान, भारत, फिलिपिन्स, म्यानमार, क्यानाडाबाट आउनु भएका बिद्यार्थीहरु अध्ययनरत हुनुहुन्छ । (२०१४ अप्रिल)
कक्षामा बिद्यार्थीको ब्यहोरा, परिक्षाको परिणाम, हाजिरी प्रतिशतमा उत्कृष्ट हुने बिद्यार्थीहरु मध्येबाट छनौट गरी छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने ब्यवस्था रहेको छ । छनौट प्रत्येक ३ महिनामा हुनेछ । छात्रबृत्ति कार्यक्रम दिर्घकालीन कोर्षका बिद्यार्थीहरुका लागि मात्र लागु हुनेछ । उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त गरेका बिद्यार्थीहरुको तर्फबाट ३ जना सम्मले छात्रबृत्ति पाउन सक्नु हुन्छ । छात्रबृत्ति रकम र बिद्यार्थी संख्या परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
उच्च अध्ययन गर्न चाहने बिद्यार्थीहरुका लागि गाइडान्स उपलब्ध गराइने छ । गाइडान्समा सहभागी भई उच्च अध्ययनको उद्देश्य लगायतका बिषयमा सम्बन्धित शिक्षक शिक्षिकाहरु संग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ । सम्बन्धित शिक्षक शिक्षिकाहरुले उपयुत्त: शैक्षिक संस्थाको छनौट तथा आवश्यक कागज पत्रहरुको तयारीका बारेमा बिस्तृतमा बताई सहयोग गर्नुहुनेछ । उच्च अध्ययनको तयारीका लागि उत्तीर्ण नहुन्जेल परामर्श, मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ ।
भिषामा लेखिए भन्दा फरक क्रियाकलाप गर्न पाउने स्वीकृती प्राप्त गरेमा हप्ताको २८ घण्टासम्म पार्ट टाईम जब (आंशिक समयको काम) गर्न सकिन्छ । भिषामा लेखिए भन्दा फरक क्रियाकलाप गर्नको लागि जापान प्रबेश गर्ने बेलामा एयरपोर्टमा आवेदन दिने वा केहि समय पछि अध्यागमन बिभागमा गएर आवेदन दिन सकिन्छ । अध्ययन लाई कुनै बाधा हुन नदिनको लागि जापान प्रबेश गरे लगत्तै काम नगर्नको लागि निर्देशन दिइन्छ । जापानको बस्तु स्थिती रहनसहन बुझिसकेपछि ३ महिना पछि जापानी भाषा बिकास बिस्तार हुने उद्देश्यले पार्ट टाइम जब गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रयोगशालाको ब्यवस्था छ । कलेज संचालन हुने बेला, बिहान १२:३० देखि १७:०० सम्म, ९:३० देखि १३:०० बजे सम्म प्रयोग गर्न सक्छन । (लामो बिदाको समयमा १०:०० देखि १७:०० बजे सम्म उपयोग गर्न सकिन्छ ।)
कलेज परिसर मा नै दिउसोको खाना बिक्रि बितरण गर्ने ब्यवस्था छ । साथै कलेज नजिकै सुपरमार्केट, कन्भिनियन्स स्टोर र रेष्टुरेन्टहरु पनि रहेका छन । कलेजमा राखिएको माइक्रोवेभ ओभनमा किनेर ल्याएको खाना वा आफुले पकाएर ल्याएको खाना तताई हलमा बसेर खान सकिन्छ ।
कलेज परिसरमा बिक्रि गरिने खाना शुल्क
दोन्बुरी ३९० येन (ठुलो ४४० येन), डेली लन्च ३९० येन, करी राईस ३६० येन (ठुलो ४१० येन) आदि
कलेजमा राखिएको हट पट र भाँडा धुने ठाँउको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एक महिनाको लिभिङ्ग कस्ट १००,००० देखि १५०,००० येन सम्म पर्दछ । जस्तै: ग्याँस बिजुली सहितको घरभाडा ४०,००० देखि ७०,००० येन, खाना खर्च २०,००० देखि ३०,००० येन, मोवाइल फोन शुल्क ५,००० येन, यस बाहेकको पकेट खर्च २०,००० देखि ३०,००० येन)
यस्तो अवस्थामा ग्राजुएसन सर्टिफिकेट दिन मिल्दैन तर पढि सकेको घण्टा बराबरको प्रमाण पत्र दिन सकिन्छ ।
सामान्यतया कुनै कागजात या प्रमाणपत्रको लागि निबेदन दिएको मितिबाट तेश्रो दिनमा दिइन्छ । कागजपत्र प्रकाशन गर्नको लागि समय लाग्ने हुनाले आवश्यक पर्ने बिद्यार्थीहरुले छिटो निबेदन दिनु पर्दछ ।
टेलिफोनबाट खबर गरेमा मात्र प्रकाशन गर्न सकिने छ । त्यसका लागि सम्बन्धित बिद्यार्थी हो कि होइन भनी परिक्षण गरिने छ । कागजपत्र प्रकाशनका लागि बिद्यार्थी स्वयंले शुल्क ब्यहोर्नु पर्दछ । प्रकाशन शुल्क, हुलाक शुल्क, पैसा पठाउँदाको बैंकको कमिशन सहितको कुल शुल्क प्राप्त भए पश्चात कलेजले उल्लेखित कागजपत्र प्रकाशन गर्दछ ।
अल्पकालीन कोर्षका लागि ३ महिना भन्दा कम समयका लागि पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । कक्षा र लेभलको बारेमा कलेजमा पहिले नै सल्लाह गर्न आवश्यक पर्दछ ।
बिभिन्न देशका खाना परिकारहरु पकाई जापानीहरुलाई आमन्त्रण गरी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु ग्रिन्छ ।
नेपाली, अंग्रजी, कोरियाली, चीनीयाँ भाषा बोल्न सक्ने कर्मचारीहरु उपलब्ध हुनुहुन्छ ।
दिर्घकालीन कोर्षमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरु चिनियाँ ७२%, ताइवानी १०%, नेपाली १७%, फिलिपिनो १% रहेका छन । (२०१४ फेब्रुअरी)
पार्ट टाईम जब सम्बन्धि सुचनाहरु प्रदान गरिन्छ तर बिद्यार्थी स्वयंको जापानी भाषाको क्षमतामा भर पर्ने हुन्छ । साथै कामको प्रकार, काम गर्ने घण्टा, पारिश्रमिक, काम गर्ने समय आदि आफनो चाहाना अनुसार हुन्छ कि हुदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । जापानको रहनसहन आदिका बारेमा प्रश्न नं १३ हेर्नुहोस ।